EPP Ampefiloha Ambodirano: nizarana “tablette” sy “kit scolaire” ireo mpianatra | NewsMada
EPP Ampefiloha Ambodirano: nizarana “tablette” sy “kit scolaire” ireo mpianatra
Nisantatra ny fizarana “kit scolaire” ho an’ny mpianatra, etsy amin’ny EPP Ampefiloha Ambodirano, ny filoham-pirenena Rajoelina Andry niaraka amin’ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, omaly.
Nahitana kojakojam-pianarana fototra tena ilain’ny mpianatra ao anatin’izany “kit scolaire” izany. Nisitraka izao fanampian’ny fanjakana izao ireo mpianatra manodidina ny 1 000 ao amin’ity EPP Ampefiloha Ambodirano ity.
Mirakitra ny hiram-pirenena ihany koa ny kahie nozaraina hahaizan’ny ankizy tsianjery tsara ny hiram-pirenena sy hanamorana ny fitadidiany izany.
Nizarana rakibolana ihany koa ny mpianatra, omaly. Tanjona amin’izany ny hanatevenan’izy ireo ny fahaizany teny malagasy. Efa voalaza rahateo ao anatin’ny veliranon’ny filoha ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny hasin’ny Malagasy ary ny teny malagasy. Mitahiry lova sesehena ho an’ny mpianatra io rakibolana io. Tsy azo sarahina amin’ny maha Malagasy ny teny malagasy. Misy karazan-tsary maro sy tenin’ny filoham-pirenena mitondra hafatra ho an’ireo mpianatra ao anatin’izany rakibolana nozaraina izany. Nahazo izany rakibolana izany avokoa ireo mpianatra 140 ao amin’ny kilasy T5 hiatrika fanadinana CEPE ao amin’ity EPP Ampefiloha Ambodirano ity.
Ankoatra ireo, nahazo “tablette” ihany koa ny mpianatra T5 ao amin’ny EPP Ampefiloha Ambodirano. Misy ny fianarana teny frantsay, ny kajy, ny fianarana manoratra sy mamaky teny ary ny manao kajy, ny lojika… ao anatin’izany “tablette” izany. Hatao ao ny fampiasana mikasika ireo taranja maromaro hanampy ny mpianatra amin’ny hakingan-tsaina.
Mbola nampanantena ny filoham-pirenena Rajoelina Andry fa hizara kiraro ho an’ireo mpianatra ao amin’ity EPP ity. Hizara vitamina sy kalsioma ho an’ny mpianatra ihany koa izy hanampy ny mpianatra amin’ny tanjaka sy hery enti-miasa.
Tetsy andaniny, nohamafisin’ny filoham-pirenena ny fampidirana maimaimpoana ny mpianatra ka haverina avokoa ny vola ho an’ireo ray aman-dreny efa nandoa izany. Horaisina ho mpiasam-panjakana ihany koa ireo mpampianatra Fram valo sy ny mpiambina ao amin’ity sekoly ity.
Hatao manerana ny Nosy ny fizarana “kit scolaire” fa santatra ihany ny natao tetsy Ampefiloha Ambodirano.